အဆိုပါ Black ကသစ်တောဂျာမဏီရန်ခရီးသွားခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါ Black ကသစ်တောဂျာမဏီရန်ခရီးသွားခြင်း
ပြီးသားသူတွေကိုသတိထားမိမ, သစ်တောသည်ဂျာမနီအနောက်တောင်ပိုင်းကျယ်ပြန့်သောသစ်တောဒေသဖြစ်သည်. ပိုများသောအထူး, က Baden-Wurttemberg ပြည်နယ်တည်ရှိသောကြောင့်တစ်သိသာသောအဘို့ကိုယူထားသောရဲ့.
ထို့အပြင်, ဒေသတွင်းနှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည် ပြင်သစ် နှင့် ဆွစ်ဇာလန်, ဒါကြောင့်လည်းအဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကနေလက်လှမ်းင်.
ဤဆောင်းပါး၌, ကျွန်တော်တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိမယ့်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပိုမိုစကားပြောလိမ့်မယ်. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ကျနော်တို့ရထားဂျာမနီရှိ Black ကသစ်တောရောက်ရှိရန်သင်မည်သို့ပြောပြပါ့မယ်.
အဆိုပါဒေသ၏ဂုဏ်အသရေသည်၎င်း၏သဘာဝတည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအချို့ သာယာလှပမြို့ရွာ. သဘောသဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ထိုဒေသတွင်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာ, သစ်တောများနှင့်ပြည့်စုံ. အဲဒီစိတျအပိုငျး Self-ရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အဲဒါကိုပိုပြီးရှိရဲ့!
အဆိုပါ Black ကသစ်တော, သို့မဟုတ် Schwarzwald ကဂျာမန်ခေါ်မယ့်အဖြစ်, အတူများစွာသောနေရာများတွင်ရှိပါတယ် လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ. ဒါဟာအစနှင့်ပြည့်စုံရဲ့ မြစ် stunning ချိုင့်နှင့်အနေသာ, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ထိပ် များစွာသော၏ တောင်ကုန်းများ မင်းဒီမှာရှာနိုင်တယ်.
ထို့အပြင်, များစွာသောလူစိတ်ဝင်စားနိုင်နေရာများအများအပြားရှိပါတယ်. သငျသညျငွိမျငွိမျမိသားစုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ခရီးစဉ်, စုံတွဲဆုတ်ခွာ, ပိုအဘို့နှင့်အံ့ဖှယျရှုခင်းများ စွန့်စားကလူ.
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်သည်တာရှည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ကဲ့သို့အားလုံးတစ်နှစ်တပြင်လုံးကိုဒေသတွေ့ပါလိမ့်မယ်! ကန့်သည့်အခါကအထင်ကြီးကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်တော့င် နေရောင်များသော, မိုးရွာများသော, နှင့် နှင်းကျရှိမယ့်အခါ,. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါဧရိယာ၏အများဆုံးဓာတ်ပုံများကို.
Konstanz ရထားမှ Offenburg
Leipzig Dresden မှရထား
ရထားအားဖြင့် Black ကသစ်တောထိဖို့ဘယ်လို
ရထားအားဖြင့် Black ကသစ်တောရောက်ရှိသင်သည်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာလုပျနိုငျကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေသတွင်းမှာ၏တည်နေရာနှင့်တကယ်တော့ကြောင့်ရထား၏အများစုရဲ့ ဂျာမနီမှတဆင့်ခရီးသွားလာစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်.
သို့သျောလညျး, ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး. သငျသညျဥရောပနီးပါးမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်ဒေသတွင်း၌များစွာသောနေရာများရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. အဲဒီအတှကျအထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့င် အဓိကမြို့ကြီးများ ပြင်သစ်နဲ့တူနိုင်ငံများရှိ, ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, အီတလီ, အများအပြားကပို.
ဂျာမနီသည်, ရထားခရီးသွားတဦးတည်းကုမ္ပဏီအဖြစ်လွယ်ကူသောဖန်ဆင်းထားသည် - Deutsche Bahn ကလည်ပတ်. အမျိုးမျိုး ICE ရထားများ, EuroCity, CityNight, အချင်းချင်း, နှင့် TGV လိုင်းများ ဒေသတွင်း၌အများအပြားဒေသများရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျ Karlsruhe မှရထားစီးနိုင်ပါတယ်, Baden-Baden, Freiburg, နှင့် Offenburg. ဤရွေ့ကားရထားလုံးကိုအဓိကဂျာမန်မြို့မြို့တို့မှ go, ဒါကြောင့်ရထားအားဖြင့် Black ကသစ်တောသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့လေပြေဖြစ်လိမ့်မည်.
သင်ပြုဆုံးဖြတ်ဘာပဲ, သငျသညျမှားပါမသွားပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါ Black ကသစ်တောသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့မှော်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတှေ့အကွုံ. သင်သုံးနိုငျသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အများအားဖြင့်ဒီဟုနေကြတယ် သာယာလှပရထား နှင့်တစ်ခုလုံးကိုဒေသသို့ခရီးလှညျ့လ. သငျသညျကမျးလှမျးခကျြမှနျက Black သစ်တောရှိပါတယ်အလှဆုံးသောအရာတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ Black ကသစ်တောသာယာလှပလိုင်းလမ်းကြောင်း Offenburg-Konstanz အပေါ်လည်ပတ်.
သင်က Want အခါတိုင်းရထားအားဖြင့် Black ကသစ်တောသွားရောက်ကြည့်ရှု!
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ဒေသတွင်းနှင့်ရထားခရီးသွားများ၏အဆင်ပြေ၏ဂုဏ်အသရေဒီခရီးစဉ်ဟာအံ့သြစရာအတွေ့အကြုံကိုအောင်. ကျနော်တို့အလွန်အမင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကသင်၏အသက်တာ၌ဂျာမဏီ၏အရှိဆုံးမှော်ဒေသတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေး! သို့သျောလညျး, ကြောင်းခရီးစဉ်ကိုသင်က Black သစ်တောကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရန်အဘို့အလုံလောက်အောင်ရှည်လျားဖြစ်သင့်!
သငျသညျဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုတက်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ, အခမဲ့ခံစားရ ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ. ငါတို့သည်သင်တို့ရထားအားဖြင့် Black ကသစ်တောသွားရောက်ကြည့်ရှုကူညီခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အမှတ်ရစရာအတှေ့အကွုံရနိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#သစ်တော #သစ်ပင်ကြီး ရထား ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်